Yini ingane ephozayo ephupha ngayo? Ukuchazwa kwengqondo yokulala
Ukuchazwa kwephupho lapho ubona khona ingane egobayo
Ukubona ingane egwinyelayo ephusheni kuyesabeka njengoba kuyiqiniso. Ngakho-ke, ngemva kwephupho elinjalo, abantu abaningi baphethwe ukucindezeleka okukhulu. Kodwa ngaphandle kwemivimbo eyonakalisiwe, lesi sibonakaliso sithembisa izinguquko ezinkulu empilweni yalowo owaba ubufakazi bakhe. Ngakho-ke yini ongayilindela esikhathini esizayo, uma uphupha ukuthi ingane igwinya? Yiziphi izibikezelo ezilungiselelwe thina kule ndaba yizincwadi ezidumile zephupho? Ake sibheke impendulo!
Yini ingane ephozayo ephupha ngayo?
Iphupho lapho ubona khona umntwana obomile ehluke kakhulu, ngezinye izikhathi ngisho nokuhumusha okuphikisanayo. Uma uphupha ukuthi ingane ihlukumezeka ukuba ingayami, ke okokuqala, zama ukukhumbula ukuthi ngubani owayengumntwana. Uma kwenzeka ukuthi ingane encane iyinzalo yakho, ngakho-ke, ngeshwa, kuyisibonakaliso sesifo esiseduze somntwana.
Uma ingane evela ephusheni ivela ekubeni yindodana noma indodakazi yomngane wakho, ke-ke, mhlawumbe, lo muntu uzobhekana nezinkinga ezinkulu zokuphila maduzane. Ukubona ingane engajwayelekile ongaqhamuka kuwuphawu lwezinkinga ezincane noma izinkathi zemizwelo emibi elinde wena. Ngakho-ke, akuyona iphupho ngephupho.
Okubaluleke kakhulu umbala wamanzi lapho ingane yayengozini. Ngakho, isibonelo, amanzi okuzula okubonakalayo, ngokusho kwabahumushi, isibonakaliso sokuchuma, ukuchuma kwemali. Yonke ibhizinisi iqalile iyoba yimpumelelo. Ngaphezu kwalokho, lo mbala wamanzi ubonisa ukuthi uzungezwe abangane abathembekile, abaqotho nabaqotho. Ukuze ubone amanzi amnyama noma amnyama amdaka - alungiselele ubunzima obukhulu bezezimali, kungenzeka ukuthi maduzane uzogula futhi uzobe esolungiswa. Futhi, ngokusho kwencwadi yokuphupha, ingane emanzini iphuzi (kusukela ekuhlanganiseni kweshlabathi noma ubumba), kusho ukuthi empilweni yakho kukhona abantu abonakala beqeda okuthile kuwe. Zama ukuhlaziya ukuthi ubani ongangumqambimanga, ngakho uzokuzivikela ezimweni eziningi nezinkinga eziningi.
Uma umntwana okhukhulayo ekwazi ukuphunyuka, uyazi: endleleni eya emgomweni okhanayo uzodingeka ukhuthazelele ubunzima obuningi, kodwa lokhu ngeke kuholele ekutheni umphumela oyifunayo, kodwa futhi kuzokukwenza ube namandla ngokuziphatha. Uma bekuyizinzalo zakho, zama ukukhokha kakhulu ekukhuliseni kwakhe.
Kuyini lokho amaphupho uma ingane igwinya
Lesi sakhiwo esibi sihunyushwa njengezincwadi zokuphupha, njengokulahlekelwa okuphawulekayo, ukulahlekelwa kwempahla ebalulekile. Ngemuva kwamasonto ambalwa emva kwephupho elinjalo, kungenjalo ungathathi imali esikweletini, ungafaki isikweletu. Uzothola imali, kodwa awukwazi ukuyibuyisela. Kanti futhi phakathi nalesi sikhathi, gwema ukuthengiselana okunobungozi - ungahlala lutho.
Uma ingane igonywa ephusheni futhi iphonswa elwandle, ungalindela izinguquko ezinkulu. Mhlawumbe lezi zinguquko zizobukeka njengezilingo kuwe, kodwa ekugcineni, zizokuzuzisa kuphela.
Yebo, iphupho ngokuphathelene nengane edilikayo ayifaki kwisigaba sokuphumula nokujabulisayo. Kodwa naphezu kwalokhu, ukuchazwa kwaleli phupho kukunika ithuba lokuphinde uqonde impilo yakho, ukucabangela kabusha indawo yakho, izenzo zakho, futhi, mhlawumbe, uhlamvu. Vumela iphupho elilandelayo lijabule ngokwengeziwe!
Incazelo yezinwele eziwa phansi ephusheni
Ziziphi izinyoka abaphupha ngazo?
Yini indlu ephupha ngayo?
Kungani uphupha ngamadonphin? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
I-Pilates: Ukuzivocavoca emuva
Incazelo yesifo ngolimi
I-Jelly kusuka ku-okhilimuli
Ukuhlasela ngokumelene nawe
Wedding dress for girls full
Imithetho yezempilo engu-15 evela emithini yemithi yaseShayina
Umnotho ofanelekayo wesifazane wesimanje
Inja endlini "ye" futhi "ngokumelene"
Ukupheka kweDucane ukudla okuNyaka Omusha 2016
Ukuqina okungaqondakali: Ama-Dolce & Gabbana Ama-Passionproof Makeup
Ukuqeda i-Cellulite ngezindlela zasekhaya
Indlela yokwenza i-gel yokugeza kanye nesepha elimanzi?
Ukuqoqa amakhambi okuhlanza isikhumba
Indlela yokuhlala njalo enhle futhi encane